Suuragal ma tahay in Maanta uu furmo Shirka Dhuusamareeb? - Awdinle Online
Suuragal ma tahay in Maanta uu furmo Shirka Dhuusamareeb?
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa habeen kahor ku dhawaaqay in Magaalada Dhuusamareeb uu ka furmayo shirweyne qaran 1-da Febaraayo 2021 si loo soo gaba-gabeeyo 3-da Feb 2021 waxaana miiska saaran ka doodista qaabka looga gudbi karo khilaafka hortaagan Doorashooyinka ay ku heshiiyeen dhinacyadaan 17-September 2020.
Mas’uuliyiin katirsan Galmudug ayaa sheegay in maanta ay saacadaha hore ee maanta ilaa duhurkii in ay sugayaan wufuudda horudhac u ah madaxda heer Federaal & heer Dowlad Goboleed si gelinka dambe maanta ay Madaxda ay u caga-dhigtaan Dhuusamareeb.
Ilo kala duwan ayaa Mustaqbal u xaqiijiyay in shirka furmashadiisa ilaa berri gaari karo, balse marka ay madaxda isugu tagto Dhuusamareeb ay yeelanayaan kulamo gaar gaar ah & kuwa guud oo lagu gundhigayo ujeedka wada-xaajoodka habka looga gudbayo Doorashooyinka.
Furmashada shirka ayaa ku xiran sida Madaxda ay u tagto Dhuusamareeb & in aysan caqabado horleh & is jiid-jiid aan dhammaad lahayn ka dhalan gogosha, maadaama laga doonayo qodobada loo arko in looga gudbi karo khilaafka waqti dheeraaday.
Previous articleCabdi Rashiid Janan oo qirtay in Ciidamo looga qabtay dagaalkii Beled-Xaawo
Next articleSoomaali lagu dilay weerar ka dhacay dowlad degaanka Soomalida Itoobiya